အမေရိကန်မှ ရှားပါးသတ္တု(Rare Earth)သုတေသနတက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၂၀မီလီယံမြုပ်နှံခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » အမေရိကန်မှ ရှားပါးသတ္တု(Rare Earth)သုတေသနတက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၂၀မီလီယံမြုပ်နှံခြင်း
အမေရိကန်မှ ရှားပါးသတ္တု(Rare Earth)သုတေသနတက္ကသိုလ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၂၀မီလီယံမြုပ်နှံခြင်း
Posted by Mr WorldWide on Feb 6, 2013 in Science & Religion, Sciences & Resources |7comments
Rare Earth ဆိုတာ အကျွမ်းမ၀င်တဲ့လူတွေ မသိမှာစိုးလို့ဒီသတင်းလေး ပြန်ပေးလိုက်တာပါ…ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးနေတယ်..ယနေ့ကာလမှာ ဘာကြောင့်အရေးတကြီးလိုအပ်နေသလဲဆိုတာ သိနိုင်အောင်လို့ပါ
အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာနမှ ရှားပါးသတ္တုထုတ်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများ သုတေသန ပြုလုပ်ပေးမည့် ဌာနတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ဒေါ်လာ ၁၂၀ မီလီယံ(ပေါင်၇၅မီလီယံ) ချပေးခဲ့ပါသည်။ ရှားပါးသတ္တုဆိုသည် မှာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးပါသည့် ဒြပ်စင် ၁၇ မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်သည် ရှားပါးသတ္တုထုတ်လုပ်မှုတွင် ကမ္ဘာ၏ ၉၅ရာခိုင်နှုန်းထက် ပိုမိုထုတ် လုပ်ပေးနေသော တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်တွင် မှီခိုနေရခြင်းကို လျော့ချလိုပြီး နိုင်ငံအတွင်း လိုအပ်ချက်အား ဖြည့်ဆည်းပေးလိုနေပါသည်။
အမေရိကန်၏ ဘူမိစစ်တမ်းအရ အမေရိကန်ပြည်နယ် ၁၄ ခုတွင် ရှားပါးသတ္တုသိုက်များ ရှိနေနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အမေရိကန် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးစွမ်းအင် (Renewable Enegy)၏ လက် ထောက်အတွင်းရေးမှုး ဒေးဗစ် ဒီနဲလ်ဆင်(David Danielson)မှ ၎င်းဒြပ်စင်များသည် အဆင့်မြင့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုနေခြင်းအပြင် လေရဟတ်၊ဆိုလာပြားနှင့် လျှပ်စစ်ကားများ ကဲ့သို့ ကာဘွန်ထုတ်လုပ်မှု နိမ့်ပါးသော ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လည်း အရေးပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်အစိုးရ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သုတေသနတင်ပြချက်များအရ ရှားပါး သတ္တုများအား မှန်ဘီလူးနည်းပညာ၊ ရေဒါ၊ ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ ကဲ့သို့သော စစ်သုံး ပစ္စည်းများတွင်လည်း အသုံးပြုထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၉၆၀ ခုနှစ် ၁၉၈၀ ခုနှစ်အထိ ကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့၏ Mountain Pass သတ္တုတွင်းမှ အမေရိကန် အား ရှားပါးသတ္တုထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်ရန် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်မှ ၎င်း ရှားပါးသတ္တုများ တင်သွင်းမှု များပြားလာသောကြောင့် ယခုအခါ နောက်ကောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ရှားပါးသတ္တုထုတ်လုပ်မှု စည်းကမ်းများ အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်ဟု ဆွီဒင်နိုင်ငံ ချလ်မာစ် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဒြပ်ပစ္စည်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးမှ BBC သို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပါမောက္ခ ခရစ်စတင်း အ်ိခ်ဘက်(Christian Ekberg)မှ Mountain Pass သတ္တုတွင်းမှာ ပတ်ဝန်း ကျင်အပေါ် ရိုက်ခတ်မှုများကြောင့် ပိတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရှားပါးသတ္တုများတွင် ဆာ လဖာနှင့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ယူရေနီယမ်နှင့် သိုရီယမ်များ ပါဝင်သောကြောင့် များစွာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။နိုင်ငံအများစုတွင် ၎င်းသတ္တုများ တူးဖော်ခြင်းအတွက် ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟု ယုံ ကြည်ရပါသည်။ ပါမောက္ခ အီခ်ဘတ်မှ အီလက်ထရောနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဟန်းဆက်အ ဟောင်းများ၊ ကွန်ပျူတာများမှ ရှားပါးသတ္တုပြန်လည်သန့်စင်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ပြန်လည်သန့်စင်မှုမှာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းပင် မရရှိနိုင်ပေ။ စမတ်ဖုန်းအားလုံးကို ပြန်လည်သန့်စင်မည် ဆိုပါက ပါဝင်မှုနှုန်း နည်းပါးလှသောကြောင့် ၎င်းဒြပ်စင်များ ရရှိရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်ဟု ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းသတ္တုများ၏ ဂုဏ်သတ္တိများသည် ဆင်တူသောကြောင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခွဲ ခြားရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
ယနေ့အချိန်တွင် ရှားပါးသတ္တုပြန်လည်သန့်စင်ရန် မလွယ်ကူသေးသော်လည်း နည်းပညာများ ဖွံ့ ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ အနာဂတ်တွင် ပိုမိုအဆင်ပြေ လွယ်ကူလာမည် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအခါ သုတေသနပြုလုပ်ထားရန်သာ အရေးကြီးပေသည်။
ကွန်ပျူတာ Hard Drives၊လေရဟတ်၊ဟိုက်ဘရိတ်ကား(Hybrid) နှင့် အသံချဲ့စက်များတွင် စွမ်း အားပြည့်သံလိုက်များ ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။
အော်တိုကားများ၏ Catalytic Converter များတွင်အသုံးပြုပါသည်။
ဒုံးပျံလေယာဉ်အင်ဂျင်များနှင့်ဂဟေဆော်သူ၏ ခေါင်းစွပ်ကာဗာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
X-ray,MRI Scanဖတ်ခြင်း၊TV Screen ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ယခုအခါ အအေးပေးခြင်း စနစ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် သုတေသနပြုလုပ်လျက် ရှိပါသည်။
US Department of Energy is giving $120m (£75m) to set upanew research centre charged with developing new methods of rare earth production.
အမေရိကားကိုယ်တိုင်က.. အင်္ဂလိပ်လိုရေးရေး… အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်နဲ့ရေးရေး.. ယူအက်စ်လို့သုံးတယ်..။
အမေရိကန်တွေကိုယ်တိုင်က.. အမေရိကားကို.. ယူအက်စ်လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတာများတယ်..
အမေရိကားကိုတော့.. အမေရိကန်နိုင်ငံလို့မခေါ်သလို.. အမေရိကန်လို့.. တိုင်းပြည်..နေရာဌာနဒေသကြီးကို.. နိုင်ငံသားနာမယ်ကြီးနဲ့ ကမ္ဘာ့ဘယ်နိုင်ငံကမှ.. တပ်မခေါ်ဘူး…
ခုရက်ပိုင်း မြန်မာသတင်းဌာနတွေသတင်းတွေထဲ.. “အမေရိကန်သွားမယ်”တွေဘာတွေတောင်ဖြစ်နေပြီ..
မြန်မာနိုင်ငံကိုကျ.. အမေရိကန်တွေက.. .. ဘားမားခေါ်ရင်.. မြန်မာအစိုးရလူတွေကမကြိုက်ကြ….
သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျ.. အမေရိကန်ကို.. နိုင်ငံသားမှန်း.. နိုင်ငံမှန်းတောင် ..အမည်မကွဲပြား..
အဲဒီထဲ.. ကယ်လီဖိုးနီးယားက.. မြို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ..
ဘာသာပြန်ပေးနေတဲ့..ဦးရင်E.T ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါတယ်နော.. :528:
ရွာသူားတွေလည်း..သတင်းမှီးပြီး.. ဆန်းစစ်.. ဆွေးနွေးကြစေချင်တယ်..။
ဥပမာ..။ Rare earth elementသတ္တုတွေက..အခုရခိုင်ကမ်းရိုးတမ်းမှာ.. တွေ့နေတာကို.. ချိုင်းနားက၀ယ်ဖို့လုပ်နေတဲ့သတင်းမျိုးနဲ့.. ဆက်စပ်တွေးကြရေးကြစေချင်မိတယ်..။
ဒီက ကိုကို လူစွမ်းကောင်းတွေက ရောင်းမှာပဲ သူကြီးရဲ့ ဘယ်သူက တားလို့ ရလို့လဲ ပြီးမှ ဒီဖက်ပြန်သွင်းတာကို ဈေးကြီးပေး ၀ယ်အုန်းမှာ လေ
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ..နောက်သတိထားပါ့မယ်။ ကျနော်လည်း အလုပ်နဲ့လူက ဒေါင်ချာဆိုင်းနေတော့
သေသေချာချာကို အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ တစ်နေ့ ၂ ပို့စ်တင်ဖို့တောင် မနည်းလုနေရတယ်။
တရုတ်က အဲဒီ ဟာကြီးနဲ့ပဲ ယူအက်စ် နဲ့ ဂျပန်ကို ကိုင်ထားတာတွေ ရှိတယ် ထင်တယ်
အဲဒါကြောင့် ဂျပန် နဲ့ တရုတ် အဆင်မပြေတော့ ဗီယက်နမ်ကို ထောက်ပံငွေတွေ အများကြီး ပေးပြီး ဗီယက်နမ် မှာ အဲဒါကြီး ရှာဘို့ ထုတ်ဘို့လုပ်တယ်
မြန်မာ မှာလဲ အဲဒါကြီး ရခိုင် ကချင် ကယားတို့မှာ ရှိတယ် ကြားဖူးတယ် ဟုတ် မဟုတ် တော့ မသိ
အပေါ်က ပို့စ် အရဆို ရင် စနစ်တကျ မထုတ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု က များမဲ့သဘောရှိတယ်
အာကသထဲက ပေါလေမြောနေတဲ့ ကျောက်တုံးတွေကို
ကဘာဂိုယူချလာပီးလုပ်စားဂျမယ်ဆို ( ဂဘာဂျီးဒေါ့ လေးအုန်းမှာဘဲ )
သတ္တုနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျုပ်ကောင်းကောင်းသိတာက သတ္တုအိုးဘဲ
သစ်ပင်တွေ အမြစ်ပါတူးပြီး ရွှေ့ယူသွားတာတော့ အကောင်အထည်လိုက် မြင်နေတော့ ပြောကြပါရဲ့
(လေးပေါက်တောင် ရွှေလီမှာလား ကျုပ်တို့ဆီက တူးသွားတဲ့အပင်တွေဆိုတာ ဓာတ်ပုံပို့စ်တင်သေး)
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းက မြေတွေ ကွန်တိန်နာနဲ့ ပေါက်ဖော်တွေ သူတို့နိုင်ငံသယ်တယ်ဆိုတာ ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့..
မြစ်ဆုံနားက သဲလေးတွေကို ကုမ်ပဏီတစ်ခုက အပြင်ထုတ်ရောင်းဖို့လုပ်နေလို့ ဓာတ်ခွဲတော့ ယူတွေ သိုတွေ rare earth တွေ ပါနေလို့ ဆွဲစိခဲ့ရဖူးပါရောလား.. (ဓာတ်ခွဲအဖြေ XRD chart ကို မြင် တွေ့ ခဲ့ဖူးတာပါ)
ကွန်မန့်တွေအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်..စိတ်ဝင်စားစေချင်ပါတယ်..မလုပ်နိုင်ရင်တောင် ဗဟုသုတပေ့ါ။ ကျန်နော်တို့မြန်မာတွေက စာဝတ်နေရေးနဲ့ပဲ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတော့ နည်းပညာဆိုတာ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဟုတ်ရင် အချိန်မပေးချင်ကြတော့ဘူး။
ဒါကြောင့်လည်း အချိန်ကုန်ခံပြီး ဒီသတင်းတွေကိုတင်ပြနေရတာပါ
အခုမနေ့က တရုတ်အစိုးရက နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့် သူ့ရဲ့ rare earth ထုတ်လုပ်မှုကို ထုတ်ပြဖို့စက္ကူဖြူစာတမ်းတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကြောင်း..တင်ဖို့အတွက် စဉ်းစားနေပါကြောင်း